ကျွန်တော် ဒီတစ်ခါ Avast AntiVirus 6.0.11 လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်...!ကျွန်တော် Serial Key လေးတွေပါ ထည့်ပေးထားပါတယ်...! လိုချင်တဲ့ သူတွေ ရှိရင် အဆင်ပြေအောင်လို့ တင်ပေးလိုက်တာပါ...! သူငယ်ချင်းတို့ သိပြီးသား ဖြစ်သောကြောင့် ရှင်းမပြတော့ပါ...! သုံးရတာအဆင်မပြေခဲ့ရင် Cbox မှာအော်သွားနိုင်ပါတယ်...!အောက်မှာ Media Fire လေးဖြင့်တင်ပေးထားပါတယ်...!
" ဒီမှာယူသွားပါ..." ( 52.19 MB )